Izindaba - Umehluko phakathi kwesipontsho se-luer-lock ne-luer-slip syringe
I-Luer-lock syringe isetshenziswa kakhulu emazweni asentshonalanga. Emazweni amaningi asathuthuka, i-luer-slip syringe ithandwa kakhulu ngenxa yezindleko zayo eziphansi.
Umklamo wesilayidi se-luer ubukeka ulula kakhulu — ungamane uwufake. Kodwa lokhu akukona ukusebenziseka kalula, kepha inkinga enkulu yomtholampilo ehlobene nokuthi isiguli singanikezwa yini isilinganiso esifanele nokufakwa kwezidakamizwa ngokuqinile. Lokhu kuthinta nokwelashwa kokugcina kwesiguli.
Yize isipetu se-luer-lock sidinga isinyathelo esingeziwe ukuze umhlengikazi asisike ngaphambi kokusisebenzisa, siqinisekisa ukuxhumana okuqinile nokuphepha kubo bobabili abasebenza kwezokwelapha neziguli. Noma ngabe ixhuma kusixhumi sokumnika esingenalutho noma amapayipi ahlukile, ukuxhumeka ngeke kunqamuke kalula ngaphansi kwezimo ezihlukile. Iqinisekisa ukuthi yonke inqubo yokwelashwa ihamba kahle! Kugwema ngempumelelo amathuba esilinganiso semithi esingalungile, ukusakazwa kwezidakamizwa, kanye nokuhlanganiswa komoya.
Ezimweni ezilandelayo zomsebenzi womtholampilo, isirinji ye-luer-lock inconywa kakhulu:
1 Lapho ulungiselela izidakamizwa ezinobuthi, umnyango ongenelelayo ujova izidakamizwa ezinamandla (njenge-lipiodol). Uma isipetu sinqanyulwe ngephutha ngesikhathi sisetshenziswa, izidakamizwa ezinobuthi zichitheka ngengozi.
2 Lapho i-hemodialysis ixhunywe kwisirinji, izodala i-heparin noma ukuphuma kwegazi kushubhu uma isikhundla sesiguli sishintsha ,;
3 Iminyango lapho kunikezwa khona izidakamizwa eziningi ngesikhathi somjovo we-intravenous bolus, ofana nomnyango ophuthumayo, i-ICU, njll .; ukungena okusha okufakwe emthanjeni kudinga inani elikhulu lemijovo ehlukahlukene efakwa emithanjeni, efana ne-furosemide noma izidakamizwa zehlisa umfutho wegazi. Umthamo wokuqala mncane kakhulu. Lapho isirinji ixhunywe enalithini ehlala ngaphakathi futhi isixhumi esingenalutho sokumnika sidonswa ngephutha futhi sanqanyulwa, umthamo wezidakamizwa awunakuqinisekiswa
4 Lapho uxhuma ku-catheter ye-venous emaphakathi, isirinji e-screw-on inganciphisa ubungozi be-embolism yomoya ebangelwa ukunqanyulwa
Ngaphezu kwalokho, ekwakhiweni kwe-luer-slip, kukhona ithuba lokunqanyulwa nokuqhekeka phakathi nenqubo yokudonsa. Lapho usebenzisa ukwakheka kwembobo yesikulufa, ungayisikisi kakhulu. Ngaphandle kwalokho isikulufa singaphuka futhi ngeke kube lula ukususwa, okuzothinta umphumela wokuxhuma.
I-Antmed ikhiqiza 1mL / 3mL imijovo yokukhiya i-luer-lockfuthi uyakwazi ukufeza ama-oda amakhulu. Sisebenza ubusuku nemini futhi sandisa imigqa yethu yefektri. Kuze kube manje, sithole ama-oda ayizigidi ezingama-60 1mL luer-lock syringe emhlabeni jikelele. Sicela uxhumane nathi nganoma yiziphi izidingo eziphuthumayo. I-imeyili yethu ithi: info@antmed.com